Dowladda oo lagu amray la dagaalanka dadka ku jira dowladda ee xiriirka tooska ama kan dadban la leh Al-Shabaab. | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Dowladda oo lagu amray la dagaalanka dadka ku jira dowladda ee xiriirka...
Dowladda oo lagu amray la dagaalanka dadka ku jira dowladda ee xiriirka tooska ama kan dadban la leh Al-Shabaab.
Kadib kulanki Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo uu la qaatay gudigii u xil saarnaa u gurmashada masuuliyiintii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay aqalka dowladda hoose ayaa waxaa ka soo baxay awaamiir ku soctay xukuumadda.
Afhayeenka dhinaca warbaahnta ee Madaxtooyada C/nuur Maxamed Axmed ayaa shaaca ka qaaday in kulankaas lagu soo hadal qaaday sidii ay Xukuumaddu ula iman laheyd qorshe ay kula dagaalanto dadka ku jira dowladda ee xiriirka tooska ama kan dadban la leh Al-shabaab.
“Suurta gal ma aha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada dadkeenna dhibaataynaya. Waxaa laga sugayaa Xukuumadda in ay la timaado qorshe lagula dagaallamayo dadkaas.” Ayuu yiri Agaasimaha Warfaafinta.